Maraykanka Oo Lagu Gelayo Shuruudo Ehelnimadu Ugu Horeyso, Ka Dib Amarkii Trump | Dhamays Media Group
Maraykanka Oo Lagu Gelayo Shuruudo Ehelnimadu Ugu Horeyso, Ka Dib Amarkii Trump
USA (Dhamays) – Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ayaa soo saaray shuruudo cusub oo looga baahan yahay dadka dal ku gal ka soo dalbanaya lix dal oo ay Muslimiintu ku badan yihiin iyo qaxootiga, waxaana looga baahan yahay in ay "qaraabo dhaw" ama xidhiidh ganacsi ku leeyihiin Maraykanka.
Shuruudahan saamaynaya dadka ka imaanaya Soomaaliya, Liibiya Suuriya, Suudaan iyo Yemen ayaa dhaqan galaya habeennimada Khamiista oo Caawa ah.
Shuruudahan ayaa waxaa la soo saaray, ka dib markii maxkamadda sare ay qayb ahaan soo celisay xayiraaddii socdaalka ee Madaxweyne Donald Trump hore u soo rogay.
Xayiraaddaas socdaalka oo marun badan dhalisay waxaa markii hore hor istaagay maxkamado hoose.
Sida uu dhigayo sharcigan cusub oo BBC-da loo xaqiijiyay, 90ka maalmood ee soo socda looma ogolaan doono in ay dalka Maraykanka soo galaan dadka ayna qaraabo dhaw ka joogin Dalkaasi.
Qaraabo dhaw waxaa lagu qeexay, waalid, xaas, carruur, wiilka iyo gabadha soddoh ama sodog loo yahay iyo walaalo.
Qaraabo dhaw waxaa laga reebay ayeyda iyo awawga, eddooyinka, habar-yaraha, adeerdada iyo abtiyaasha, gabdhaha iyo wiilasha ay walaalada ay dhaleen, xididka, qaraabada kale iyo carruurta ay carruurtooadu dhaleen.
Waxaa mamnuucitaanka laga reebay dadka dadka xidhiidhka ganacsi ama mid waxbarasho la leh dalka Maraykanka.
Si kastaba ha ahaatee, shuruudahan cusub waxay si gaar ah u xusayaan in xidhiidhku uu noqdo mid la ogyahay oo caddayn loo hayo si caadi ahna ku yimid oo aan lagaga xeeladaysanaynin sharcigan cusub.
Previous: Daawo Masuuliyiinta Wasaarada Waxbarashada Ayaa Kulan La Qataye Maamulayaasha Gobaha Imtaxaanaadka Qaranka Somaliland Ee Dhowan Ka Bilabmaye Dalka
Next: DAAWO: Hawl-gal Dawladda Hoose Ee Hargeysa Waddooyin Ku Bannaysay Maanta